အန္တရာယ်ကင်းဂါထာနာမည်မှာ SWOT | PRO-X Software Solution
အန္တရာယ် ကင်းအောင် လူတိုင်းနေချင်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ကင်းမှသာ မိမိရဲ့ ဆက်လျှောက်မယ့် လမ်းခရီးဟာ ချော မွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အောင်မြင်မှု ရပါလိမ့်မယ်။ လူတစ်ဦး တစ်ယောက်က သူ့ဘဝအောင်မြင်မှုရဖို့အတွက် ကြိုတင်တွက်ဆ ထားတဲ့အခက် အခဲတွေကိုတွေ့နိုင်သလို ကြိုတင် တွက်ဆမထားတဲ့၊ မထင်မှတ်ဘဲ ပေါ်လာ တတ်တဲ့ပြဿနာတွေ ကိုလည်း ကြုံရမှာပါ။ အဲဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကာယကံရှင်အနေနဲ့ ခံနိုင်ရည်အားနည်းနေ တယ်ဆိုရင် အမှန်တကယ်ပဲ ထိခိုက်ကျဆုံးသွား တတ်ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီတွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုတာကလည်း လူထဲက လူတွေ တည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထား ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ လူတွေပါဝင်ပတ် သက်နေ သလို လူတွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေနဲ့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။ အောင်မြင်မှုပန်းတိုင်ရောက်ရှိအောင်လည်း အဲဒီလူတွေကပဲ ကြိုးစားရ မှာဖြစ်သလို ကျဆုံးပျက်စီးရင်လည်း အဲဒီလူတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့် ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းတော်တော်များများဟာ မိမိတို့ရဲ့ ခြေလှမ်းတွေ မမှားရအောင်၊ ရုတ်တရက်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်တွေကို ကာကွယ်နိုင်အောင်ကြို တင် ကာကွယ်ကြဖို့လိုပါတယ်။
ဒါကြောင့်ပဲ ထင်ပါရဲ့။ အတော်များများဟာ SWOT ဆိုတဲ့ အန္တရာယ်ကင်း ဂါထာတွေကိုအရေး တကြီးရွတ်ဖတ်လာကြပါတယ်။ မိမိကုမ္ပဏီ၊ မိမိလုပ်ငန်းတွေကို SWOT ဆိုတဲ့ဂါထာနဲ့ စည်းချပြီး ဖြစ်ပေါ်လာ နိုင်တဲ့မကောင်းမှုတွေကို ကာကွယ်လာကြပါတယ်။ ဒီတော့ SWOT ဆိုတာဘာလဲလို့မေးကြတော့မှာ သေချာ ပါတယ်။ အဖြေကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ ဖြစ် ပေါ်လာနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းကို အရယူဖို့ အားနည်းချက်ကိုပြင်ဖို့၊ အားသာချက်ကို ထွန်းကားစေဖို့ အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် ကိစ္စမှန်သမျှဟာ SWOT ပါပဲ။ SWOT ဂါထာပါပဲ။
ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမဆို၊ ဘယ်လိုအမျိုး အစားမဆို ကြီးချင်ကြီးမယ်၊ သေးချင်သေးမယ်၊ ဝန်ထမ်း အရေအတွက် နည်းချင်နည်းမယ်၊ များချင်များ မယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ SWOT ကိုတော့ မဖြစ်မနေ သုံးရပေ လိမ့်မယ်။ SWOT ကသာ ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို အဆင်ပြေချောမွေ့အောင် ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်လိမ့်မယ်။ အန္တရာယ်နဲ့ အခွင့်အလမ်းကို ခွဲခြားပေးနိုင်လိမ့်မယ်။ အားသာချက်က ဒီဟာ၊ အားနည်းချက်က ဟိုဟာ စသဖြင့် ထောက်ပြ နိုင်ပေလိမ့်မယ်။
တကယ်တော့ SWOT ဟာ ကုမ္ပဏီတိုင်း၊ လုပ်ငန်းတိုင်း လက်ကိုင်ထားရ မယ့်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်တိုင်း သတိပြုရမယ့်ကိစ္စဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ SWOT ကို အကျယ်ချဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင် SWOT Analysis ဆိုတာကို တွေ့ရမှာပါ။ SWOT Analysis ဆိုတာအရောင်း အဝယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုရဲ့ Marketing Plan ထဲမှာ ပါဝင်တဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ဒါထက်ကျယ်ပြန့်တဲ့၊ ဒါထက် အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့၊ ဒါထက် လေးနက် တဲ့သဘောကိုဆောင်လာပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကာယ ကံရှင်တွေရဲ့အတွေးအယူ အတိမ်အနက်အရ ပိုမိုကျယ်ဝန်းနက် ရှိုင်းတဲ့ တခြားနယ်ပယ်တွေအထိ သက်ရောက် အကျုံး ဝင်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
စီးပွားရေးအဘိဓာန်မှာတော့ ဒီလိုပဲရိုးရိုးလေးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပါတယ်။ "SWOT analysis: SWOT is an abbreviation for Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. InaSWOT analysis,acompany identifies its internal strengths and weaknesses and the external opportunities and threats it faces, so that it can be more successful? increace its profits and outdo its competitor" ပါတဲ့။
ကုမ္ပဏီတစ်ခု၊ လုပ်ငန်းတစ်ခုဟာ မိမိတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေ၊ လုပ်ငန်း တွေအောင်မြင်မှုရရှိစေဖို့အတွက် ဆန်းစစ်လေ့ လာကြဖို့လိုပါတယ်။ ဒီနေရာ မှာ အကောင်းမြင်သမားတွေလို ကိုယ့်ဘက်က သာလွန်ချက်တွေ၊ ကောင်းမွန်ချက်တွေ၊ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသာ မြင်နေတာမျိုး မဖြစ်သင့် သလို အဆိုးမြင်သမားတွေကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချို့ယွင်းချက်တွေ၊ ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေနဲ့အန္တရာယ်တွေ၊ ဘေးဒုက္ခတွေကိုပဲ လက်ညှိုးထိုး ပြနေလို့လည်း မသင့်ပါဘူး။
လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်၊ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းနဲ့လုပ်ငန်း တွေအားလုံးမှာ အားနည်းချက်၊ အားသာချက်ရှိပါတယ်။ အန္တရာယ်နဲ့ အခွင့်အလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီအထဲက ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကို ပြုပြင် တည်ဆောက်ပြီး အားသာကောင်းမွန်ချက်တွေကိုမြှင့်တင်တာဟာလိုအပ်တဲ့၊ အရေး လည်းကြီး တဲ့ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကိုဂရုထားနိုင်ဖို့အတွက် ဆန်းစစ်လေ့လာတာဟာ SWOT Analysis ပါပဲ။
SWOT ကို အကျယ်ပြန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ ‘S’ ဆိုတာ Strengths ဆိုတဲ့ အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်ဆိုးဝါး တဲ့အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါစေ။ ‘S’ ဆိုတဲ့ Strengths ကို ပိုမို အားကောင်းထွန်းကား အောင်လုပ်နိုင်ရင် အဲဒီအခက်အခဲအကျပ် အတည်းကလွတ်မြောက်အောင် ဖန်တီးနိုင်တဲ့လမ်းစကိုတွေ့ရပါ လိမ့်မယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ‘W’ ဆိုတဲ့ Wenknesses အားနည်းချက် တွေကိုပြုပြင်ကာ၊ ထပ်မံမဖြစ်ပွားအောင် ဂရုပြုအလေးထားတာကလည်း အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားနည်းချက်မရှိတဲ့ ခြောက်ပြစ်ကင်းသဲလဲစင်လို့ မြင်နေတတ်မှုမျိုးဟာ ကျဆုံးပျက်စီးရတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အလုပ်ကိုပဲလုပ်လုပ်၊ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေ့တွေ့ တိမ်ညိုတိမ်မဲ တိုင်းမှာ ငွေရောင်အနား ကွပ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ စကားတိုင်း ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခုကတော့ ရှိစမြဲပါ။ အဲဒီ အခွင့်အလမ်း Opportunites ဆိုတဲ့ ‘O’ ကို လက်လွတ်မခံကြဖို့ လိုပါတယ်။
‘T’ ဆိုတဲ့ Threats ဟာ အန္တရာယ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အလုပ်ကိုပဲ လုပ်လုပ် အန္တရာယ်ဆိုတာ အနည်းနဲ့အများရှိစမြဲပါ။ ရင်ဆိုင်မျှော်မှန်း ထားတဲ့ အန္တရာယ်တွေရှိသလိုမမျှော်လင့်တဲ့ အချိန်အခါမျိုးမှာ မထင်မှတ် ဘဲကြုံရတတ်တဲ့ အန္တရာယ်မျိုးလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ 'အောင်ပွဲဆိုတာ အန္တရာယ်ကိုရင်မ ဆိုင်ဘဲ မရနိုင်' ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားလိုပဲ အောင်ပွဲလိုချင် မှတော့ အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ရဲ ရပေမပေါ့။ သူရဲကောင်းတွေ၊ အောင်မြင် သူတွေဟာ အန္တရာယ်မီးပင်လယ်ကို ကူးလာကြသူတွေလေ။ ဒီတော့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအောင် မြင်ဖို့ဆိုရင် အန္တရာယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့၊ ပြင်ဆင်ထား ဖို့လိုသလို အကောင်အထည်ဖော်ဝံ့တဲ့သတ္တိလည်း မွေးထား သင့်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာအနှံ့က ကုမ္ပဏီကြီးတွေ၊ ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးတွေ၊ လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဟာ SWOT စည်းဆိုတဲ့ အန္တရာယ်ကင်းဂါထာနဲ့ စည်းချပြီး လုပ်ငန်းတွေ ကိုဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ် လုပ်ငန်းရှင်မဆို မိမိလုပ်ငန်းအတွက် မကောင်းတာတွေပျက်ပြယ်ပြီး ကောင်းတာ ထွန်းကားဖို့အတွက် အဲဒီ ဂါထာက အစဉ်အမြဲလိုအပ်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
ရေးသူ - ထက်ကျော်
Visits : 3729